Dagaal aad ugu xoogan dagaaladii hore oo caawa ka socda No: 50 - Caasimada Online
Home Warar Dagaal aad ugu xoogan dagaaladii hore oo caawa ka socda No: 50
Dagaal aad ugu xoogan dagaaladii hore oo caawa ka socda No: 50
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka kusoo dhacaya warqabadka Caasimada Online ayaa ku waramaya in caawa uu dagaal aad u xoogan uu ka socdo deegaanka No 50 ee duleedka degmada Afgooye, halkaasi oo weerar dhowr jiho ah ay kusoo qaadeen xoogaga Al-Shabaab fariisimo ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin halkaasi.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in dagaalkaan oo bilowday markii mindidiinta Al-Shabaab ay labo jiho kasoo weerareen fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, isla markaana Al-Shabaab kala kulmeen iska caabin.
Hubka noocyadiisa kala duwan ayey labada dhinac isku adeegsanayaan, waxaana lagu soo waramayaa in dagaalku uu yahay mid aad ugu xoogan dagaaladii hore ee mudooyinkaan soo qaadayeen Al-Shabaab.
Gudoomiye Kuxigeenka amniga ee maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Cali Nuur Maxamed ayaa sheegay in Al-Shabaab soo weerareen fariisimaha ciidamada dowladda ee No 50 isla markaana uu dagaalka socdo, waxaana jira gurmad iyo dadaal ay iskaga caabinayaan kooxda weerarka soo qaaday.
Madaafiicda culculus ayaa laga maqlayaa duleedka degmada Afgooye sida ay ku waramayaan dadka deegaanka.
Lama ogaan karo khasaaraha dagaalkaasi oo weli socda, waxaana adag in si dhab ah loo ogaado xaalada ka taagan goobta dagaalku ka socdo.
Al-Shabaab ayaa looga bartay in xiliyada habeen barkii iyo waaberigii weeraro gaadmo ah kusoo qaada fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca ammaanka ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Cali Nuur Maxamed, ayaa sheegay in Shabaabku ay weerar ballaaran ku soo qaadeen Nambar Konton, isla-markaana ay labada ciidan wadaan dadaalo ay isaga caabinayan.
Gudoomiye Kuxigeenka oo la hadlay Dhacdo.com, ayaa Shabaabka ku eedeeyay in xaalad qalqal ahi ay geliyen bulshada deegaanka, ujeedkooduna uu yahay inay muujiyan in weli jooggan gobolka.
Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa waxaa loo arkaa midka ugu badan ee weerarada ka gaystan maleeshiyaadka taabacsan mintidiinta Al Shabaab.